Sintomy: Ny torolàlana mazava sy feno ho an'ny traikefa mifototra amin'ny kaonty (ABX) | Martech Zone
Ny demandbase dia manova ny fomba fivarotana orinasa B2B. Demandbase One no vahaolana feno indrindra amin'ny vahaolana amin'ny tsena B2B, mampifandray ny traikefa amin'ny kaonty, dokam-barotra, varotra ary ny vahaolana amin'ny angona B2B ka ny ekipa Marketing sy Sales amin'ny orinasa lehibe indrindra sy haingana indrindra dia afaka miara-miasa haingana, mizara faharanitan-tsaina ary miaina fitomboana mipoaka.
Lehiben'ny Marketing, Jon Miller, dia nanoratra sy namoaka an'ity ebook vaovao mahafinaritra momba ny fivoaran'ny kaonty Marketing-based (ABM) ... Traikefa mifototra amin'ny kaonty (ABX).
Inona ny Experience azo avy amin'ny kaonty (ABX)?
Izy io dia fotokevitra ifotony sy ivon-toerana mifantoka amin'ny mpanjifa amin'ny fivarotana kaonty mifototra amin'ny kaonty - iray izay manambatra ny fahafaha-miditra amin'ny marketing anatiny sy ny marimaritra iraisana ary ny kendrena amin'ny Marketing-based Account. ABX dia manatsara ny lafiny rehetra amin'ny traikefan'ny mpividy mandritra ny androm-piainan'ny B2B ary mihoatra lavitra noho ny ABM tsotra sy ny genan'ny fangatahana nentim-paharazana. ABX dia fivoarana mety amin'ny Marketing-based Marketing.
Ny varotra B2B maoderina dia ny fanatsarana ny lafiny rehetra amin'ny traikefan'ny mpividy, mandritra ny androm-piainan'ny B2B, ary ny ABM tsotra sy ny fangatahana nentim-paharazana. Fotoana izao ho an'ny fivoarana manaraka amin'ny paikadim-barotra any amin'ny B2B. Tsy afaka manao zavatra mitovy hatrany isika ary manantena valiny hafa.
Soa ihany, modely vaovao, fizotra vaovao ary teknolojia vaovao - entin'ny AI sy angon-drakitra lehibe - no nipoitra mba hampisehoana làlana tsara kokoa ho an'ny orinasa B2B rehetra: Experience-based Experience. Ity ny torolàlana ofisialinao sy feno momba ny fampiharana ny mason-tsivana mifantoka amin'ny mpanjifa sy mifototra amin'ny kaonty amin'ny paikady B2B mankany amin'ny tsena. Ao anatin'ilay torolàlana:
Fa maninona no iainana ny kaonty?
Ireo fomban'ny ABX
Raharaha momba ny marika
Ireo fizotra 5 ABX
Amboary ny fototry ny angona kaontinao
Mitadiava kaonty izay maninona
Ampandraiso anjara (Hahafantatra, Ataovy manokana, hanaovana doka, hifaneraserana, na handaminana)
Fahafahana akaiky amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny varotra sy ny varotra
Fandrefesana ny fandrosoan'ny kaonty
Ny ebook dia misy koa fampahalalana momba ny fananganana ny ekipanao ABM kintana rehetra, ny fomba famaritana ny tetibola, ary misy ny takelaka fiasa sasany hanombohana anao.
Sintomy ny torolàlana mazava sy feno ho an'ny traikefa mifototra amin'ny kaonty (ABX)
Tags: abmabm dokaabm teti-bolaabm ebookabm fianjadianafanatanterahana abmabm orchestrationpaikady abmabxfitsangatsanganana kaontytraikefa mifototra amin'ny kaontyvarotra miorina amin'ny kaontyailehibefitakianaDownloadeBookfandraisana andraikitramaimaim-poana Download